Bilowgii toddobaadkan, Siri codsi adeegsadayaashu waxay nagu wargeliyeen taariikhda la qaban doono Shirka loogu talagalay horumarinta ee sanadkan. The Xiga WWDC wuxuu ka dhici doonaa San Francisco inta u dhexeysa Juun 13 iyo 17. Saacado yar kadib Apple waxay si rasmi ah ugu daabacday taariikhda rasmiga ah bogga WWDC, isagoo xaqiijinaya macluumaadka uu Siri xaqiijiyey saacado ka hor. Shirkan Apple waxay noo soo bandhigi doontaa wararka ku imaan doona noociisa ugu dambeeya bisha Sebtember ilaa iOS 10, OS X, tvOS iyo watchOS.
Halka Apple ay sii waddo inay ka dagaalanto dalal dhowr ah si iPhone-ka cusub ee SE uu u bilaabmo in si caadi ah loo iibiyo, dalal kalena waa noqoshada guul baaxad leh, sida ka dhacday Shiinaha halkaa wuxuu bilaabaa inuu cuno dhul soo saarayaasha dalka. Toddobaadkan Japan ayaa hoos u dhigtay qiimaha dhammaan noocyada iPhone iyo iPad inta ay joogaan Hindiya, moodooyinka 6 iyo 6s waxay la kulmeen kor u kac 29% in la isku dayo oo la abuuro farqi u dhexeeya iPhone-ka cusub ee cusub ee loo yaqaan 'iPhone SE' iyo iPhone '' '' '6'.
Waxay u muuqataa in Apple ay ka daalayso taas horumariye kasta wuxuu ku sameeyaa wuxuu rabo barnaamijyada uu u sameeyo Apple Watch iyo laga bilaabo Juun App Store Waxay aqbali doontaa oo keliya codsiyada lagu maamuli karo wadan ahaan Apple Watch. Sida ku xusan wararkii ugu dambeeyay, waxay umuuqataa in Apple laga yaabo inay leedahay ujeedo ka bood iPhone 7s oo si toos ah ugu tag iPhone 8, iPhone 8 ah oo sameyn lahaa bilaa badhanka guriga ee caadiga ah.
Ku sii wadista FBI iyo Apple, sida muuqata Xafiiska Baadhista ee Federaalka ayaa ku khasbanaaday Bixi hal milyan oo doolar si aad uhesho taleefanka iphone ee argagixisada loo adeegsaday Qaraxyadii San Bernardino. Dacwadda FBI-da ee ka dhanka ah Apple ayaa khasnado badan oo mareykan ah ku qaadeysa haddii aan tixgelinno lacagaha kale ee ay ku bixisay shirkadaha kale si ay u helaan isla aaladda.
Iibinta iPhone-ka ee 2016-ka way ka sii xumaan kartaa tii 2014-kii
Dib u eegida AliveCor Mobile ECG, elektrokografdigraaf jeebkaaga kujira